ọzọ ...Ịdọ aka ná ntị na mkpọchi
Akwụsịtụ na akara
Kpesa ọdịnaya na-akwadoghị na ọgbakọ: abuse@schagerer.com
Biko guputa ihe edeturu ma kwado ha n'uzo onye nkịtị dika ÖStGB §.
1. Ibu maka ọdịnaya nke weebụsaịtị a
Anyị na-emepụta ọdịnaya nke weebụsaịtị a mgbe niile ma na-agbalịsi ike ịnye ozi ziri ezi na nke ọhụụ. O di nwute, anyi agaghi enwe ike iburu ihe obula maka idozi ihe nile di na weebụsaịtị a, karia maka ndi nke ndi ozo nyere. Maka ọdịnaya nke ebe echekwara echekwa ma chekwaa ebe a na-edebe Archive, ọ bụ onye nwe ụlọ ọrụ, ọ bụghị onye ọrụ ahụ nwere ọrụ, nke a na-enye naanị teknụzụ teknụzụ dịnụ ma na-adabere dị ka §16 ECG dịka onye na-eweta ọrụ ọ bụghị maka ndị òtù ya na ọrụ ha. Ọ bụrụ na ịchọta nsogbu ọ bụla ma ọ bụ iwu na-akwadoghị, biko kpọtụrụ anyị ozugbo, ị ga-ahụ nkọwa kọntaktị na akara ahụ.
2. Ibu maka njikọ na ebe nrụọrụ weebụ a
Ebe nrụọrụ weebụ anyị nwere njikọ na weebụsaịtị ndị ọzọ bụ ndị enweghị ọdịnaya anyị. Enweghi maka ebe nrụọrụ weebụ jikọtara anyị dị ka § 17 ECG si dị, n'ihi na anyị amaghị ihe gbasara iwu na-akwadoghị, anyị achọpụtakwara na iwu akwadoghị na anyị ga-ewepụ njikọ ozugbo ma ọ bụrụ na anyị amara ihe ọ bụla na-akwadoghị. Ọ bụrụ na ị hụ njikọ njikọ na-akwadoghị na weebụsaịtị anyị, biko kpọtụrụ anyị, ị ga-ahụ nkọwa kọntaktị na akara ahụ.
3. Nchekwa data akpaaka
Mgbe ị gara na ebe nrụọrụ weebụ taa, a na-ahapụta ozi ụfọdụ ma chekwaa, gụnyere na weebụsaịtị a. Ọ bụrụ na ị gaa na ebe nrụọrụ weebụ anyị dị ka ọ dị ugbu a, sava weebụ anyị (kọmputa nke ebe nrụọrụ weebụ a na-echekwa) na-echekwa data dị ka adreesị (URL) nke weebụsaịtị ị na-achọ, ihe nchọgharị na nsụgharị nchọgharị, usoro sistemụ eji, adreesị (URL) nke gara aga Page (Onye ntinye URL), aha aha na adreesị IP nke ngwaọrụ nke ana enweta ya, na ụbọchị na oge na faịlụ (faịlụ ndekọ ihe nkesa weebụ). Dịka iwu, a na-echekwa faịlụ ndekọ ihe nkesa weebụ maka izu abụọ wee ehichapụ ya na akpaghị aka. Anyị anaghị egosiputa ozi a, mana anyị enweghị ike ịchịkwa na a ga-ahụ ya na omume nke omume iwu akwadoghị. Ihe iwu kwadoro, dị ka Nkeji edemede 6 paragraf nke 1 f DSGVO (iwu nke nhazi), bụ na enwere mmasị dị mma iji mee ka ọrụ arụmọrụ a na-enweghị isi site na ịde faịlụ ndekọ faịlụ weebụ.
4. Nchekwa nke data onwe onye
Data nkeonwe na ị na-edozi anyị na ebe nrụọrụ weebụ a, dị ka aha, adreesị ozi-e, adreesị ma ọ bụ ozi nkeonwe ọzọ na-enyefe ụdị ma ọ bụ nkwupụta, anyị ga-ejikọta ya na oge na adreesị IP eji maka nzube a kapịrị ọnụ, echere ya ma ghara ikpughe ya na ndị ọzọ. Anyị na-eji data onwe gị maka nkwurịta okwu na ndị ọbịa ndị na-arịọ arịrịọ maka nkwupụta na maka nhazi nke ọrụ na ngwaahịa ndị a na-enye na ebe nrụọrụ weebụ a. Anyị agaghị egosiputa ozi nkeonwe gị n'enweghị nkwenye, ma anyị enweghị ike ịchịkwa na a ga-ahụ ya na omume nke omume iwu akwadoghị. Ọ bụrụ na ị zitere anyị ozi nkeonwe site na e-mail, site na ebe nrụọrụ weebụ a, anyị agaghị enwe ike ijide n'aka nnyefe na ichedo data gị. Anyị na-akwado ka ị ghara izipu ozi nzuzo site na email. Ihe iwu kwadoro n'okpuru Nkeji edemede 6 (1a) nke GDPR (iwu nke nhazi) bụ na ị na-enye anyị nkwenye na nhazi nke data ị banyere. Ị nwere ike iwepu nkwenye a n'oge ọ bụla, ozi-e zuru ezu zuru ezu, ị ga-ahụ nkọwa kọntaktị anyị na akara ahụ.
5. Ikike dịka Usoro Iwu Nchekwa Data
Dịka atụmatụ nke GDPR na Iwu Nchedo Nchedo nke Austrian (DSG), ha nwere ikike ndị na-esonụ: ikike ịhazigharị (Nkeji edemede 16 GDPR), a ga-ehichapụ (Nkeji edemede 17 GDPR), ikike iji kwụsị ọrụ (Nkeji edemede 18 DSGVO), ikike iji ngosi, ọrụ ngosi na njikọ na nhazi ma ọ bụ nhichapụ nke data nkeonwe ma ọ bụ njedebe nhazi (Nkeji edemede 19 GDPR), ikike maka ihe ọmụma data (Nkeji edemede 20 GDPR), ikike nke ịjụ (Nkeji edemede 21 GDPR), nri, ọ bụghị otu ka etinye aka na mkpebi nke dabeere na nhazi ngwaọrụ, gụnyere ịkọwapụta, (Nkeji edemede 22 GDPR). Ọ bụrụ na ị kwenyere na nhazi nke data gị mebiri iwu nchedo data ma ọ bụ ma ọ bụrụ na e mebila ihe mkpuchi nchedo data gị, ị nwere ike ịka mkpesa na onye nlekọta ahụ, nke dị n'Austria bụ nchekwa nchebe.
Ụlọ ọrụ anyị na-eji kuki HTTP iji chekwaa data ndị ọrụ. Kuki bụ obere ihe data nke gbanwere n'etiti ihe nchọgharị weebụ na sava weebụ, mana ọ bụ ihe efu na ha ma na-eji ya maka ngwa weebụ, dị ka ngwa weebụ. Dịka otu nzukọ, dịka ọmụmaatụ, site na ịchekwa oge nchịkọta data maka akaụntụ onye ọrụ nke ịbanyela na nnọkọ ahụ. E nwere ụdị kuki abụọ: A na-emepụta kuki nke mbụ site na ebe nrụọrụ weebụ anyị, na saịtị ndị ọzọ na-ejikwa kuki ndị ọzọ (eg Cloudflare). Enwekwu ọdịiche dị n'etiti ụdị kuki atọ, nke a na-adabere na mkpa ọ dị iji: kuki ndị dị mkpa iji hụ na isi ọrụ nke weebụsaịtị, kuki ọrụ iji hụ na arụmọrụ weebụsaịtị na kuki echekwara iji melite ahụmịhe ọrụ. Kuki anyị nke mbụ bụ ihe dị mkpa maka iji hụ na ọrụ nke ọrụ ahụ enweghị data ọ bụla dịka adreesị IP gị ma ọ bụ adreesị ozi-e gị. Ya mere, kuki anyị dabere na § 96 Usoro Kọntaktị Nlekọta (TKG), ebe ọ bụ na ọrụ agaghịzi arụ ọrụ maka ndị ọrụ niile mgbe enwere ike kuki. Nkwekorita nke ihe TKG pụtara abụghị ihe dị mkpa. Kpọmkwem, ndị a bụ kuki ndị mbụ na-esonụ: * _data, * _t, * _did na optionally xt_ddos_key, xt_fboff na xt_banman dị ka kuki oge maka nbanye na data nnọkọ, xt_cdn, xt_dir na xt_rewrites iji degharịa gị ịnweta site na Cloudflare , yana xt_cookiecheck iji mee ka ị mara na edetu na-esote mkpuchi nbanye, ma ọ bụrụ na ị nwere kuki njikwa na nchịkọta ihe nchọgharị gị. Kuki kuki nke ọzọ bụ __cfduid bụ kuki dị mkpa nke sitere na Cloudflare. Anyị na-eji ọrụ Cloudflare iji chedo ọrụ anyị megide mbuso agha DDoS, ma ọ bụghị na a ga-ejide ha nnweta. A na-echekwa kuki na ngwaọrụ gị ruo mgbe oge ha ga-agwụ ma ọ bụ ruo mgbe ị ga-ehichapụ ha, nke nwere ike ime dabere na ihe nchọgharị mgbe ị na-emechi ihe nchọgharị gị. Ọ bụrụ na ị naghị ekwe ka anyị jiri kuki, i. gbanyụọ ndị a site na mwube ihe nchọgharị, ọrụ ụfọdụ na ibe enweghị ike ịrụ ọrụ dị ka ana-atụ anya ya.
7. Ihe etinye Usoro ojiji